China Submersible tsvina tsvina mvura anyudza pombi fekitari uye vagadziri | Tongke
Muenzaniso Nha: WQ
Vertical turbine drainage pombi inowanzo shandiswa kupomba hapana ngura, tembiricha isingasvike 60 ° C, yakamiswa yakasimba (isingasanganisi fiber, iyo grits) isingasviki 150 mg / L zvemukati mesaweji kana tsvina mvura. LPT mhando yakatwasuka pombi yemvura iri muLP mhando yakatwasuka mapombi emvura, uye pahwaro hwekuwedzera uye neiyo kora, isa iyo tube mafuta girisi imvura. Inogona kupfungaira tembiricha iri pazasi pe60 ° C, kutumira kune imwe tsanga yakasimba (simbi isina tsvina uye jecha rakanaka, marasha, nezvimwewo) yemvura yetsvina kana yekurasa mvura.
Mari yekuvaka yakaderera
Akangwara kutonga kwekuchengetedza kwakachengeteka
Yakaderera kumhanya mutengo
Tsanangudzo Hunhu hunobatsira hweWQ dzakateedzana Sewage pombi
1. Vazhinji vevamanikidzi vane pombi yemukova uri pasi pemazana mana vanouya semubin-runner impeller uye vashoma vacho is a multi-blade centrifugal impeller. Nepo vazhinji vevamanikidzi vane pombi yekumusoro 400 uye pamusoro vachiuya senge yakasangana kuyerera impeller uye vashoma vacho vari bi-mumhanyi impeller. Yakakura pombi casing mumhanyi inoita kuti zvakasimba zvipfuure zviri nyore uye tambo dzakaputirwa zvisina kugadzikana kuitira kuti inyatso kukodzera kuburitsa tsvina netsvina.
2. Maviri akazvimirira ega-ekupedzisira-echiso mechina zvisimbiso zviri-zvakateedzana zvakaiswa, neiyo yekumisikidza modhi senge yemukati yekumisikidza modhi, uye, kana ichienzaniswa neyekunze yekumisikidza modhi, iyo yepakati haina kugadzikana kudonha uye zvakare kwayo yekuisa chisimbiso kukwikwidza vaviri zviri nyore yakagadziriswa nemafuta mukamuri yemafuta. Chinhu chakakomberedzwa chakakora kana musono diki chinoshandiswa kurwisa tsanga dzakasimba kuti dziiswe pachisimbiso chemuchina nepombi kuti ive nechokwadi nebasa rayo rakagadzikana. Iyo yakasarudzika yemakaniki chisimbiso dhizaini modhi uye inotakura musanganiswa inoita kusimiswa ruoko rwe shaft ipfupi, inorema kuomarara uye kusvetuka kudiki, kubatsirwa kwakawanda pakuderedza kuburitsa kubva kune yechimakanika chisimbiso uye kuwedzera hupenyu hwayo.
3. Iyo mota yegiredhi rekudzivirira IPX8 inoshanda mune yakanyudzwa modhi uye inobata yakanakisa kutonhora mhedzisiro. Iyo giredhi F kuputira inoita kuti ichitenderera itakurike kune yakanyanya tembiricha uye, zvichienzaniswa neyakajairika mota, inogara yakasimba.
4. Iko kusanganiswa kwakasarudzika kweiyo yakasarudzika yemagetsi kudzora kabati, iyo yemvura mwero inoyerera-bhora switch uye izvo zvinodzivirira zvinotakura otomatiki yekutarisa uye alarm yekudonha kwemvura uye ichitenderera kupisa, kudzivirirwa padiki diki, kuwandisa, kushaya-kwe-chikamu uye magetsi-akarasika akachekwa, iwo chaiwo auto-kutonga kwekutanga, kumira, kuchinjanisa uye kushoma kwakanyudzwa kwakadzika kwepombi, pasina kudiwa kwevanhu vakasarudzika yekutarisira, sarudzo pakuda inowanika pakati peyakazvideredza kudzikisira kutanga uye zvemagetsi zvakapfava. tanga. Zvese izvi zvinoita kuve nechokwadi chekushandisa kwakachengeteka uye kwakavimbika kwepombi pasina kunetseka.
5. Zvese mota uye hydraulic zvikamu zvakabatana zvakabatana, pasina kudiwa kwekutenderedza shaft ye centering, zvakapatsanurwa uye kuunganidzwa kuchengetedza nguva, kubatsirwa kwekuchengetedza saiti, kudzikamisa iyo yakamira nguva, kuchengetedza mutengo wekugadzirisa; yakapusa uye compact dhizaini inosiya diki vhoriyamu, inongori nyore kusimudza michina inodiwa, seyakakosha yekusimudza mubati yakaiswa papombi; nzvimbo yepasi shoma uye pombi inogona kuiswa yakananga mudziva retsvina, pasina kudikanwa kwepombi yepombi imba, uye nekudaro mari yekuvaka inogona kuponeswa neanopfuura makumi mana.
6.Inowanikwa nemashanu ekumisikidza modes aunosarudza: otomatiki-akabatanidzwa, anotakurika akaoma-pombi, inofambiswa nyoro-pombi, yakatarwa yakanyorova mhando uye yakamisirwa yakaoma mhando yekuisa modes.
Iyo yekumisikidza-yakasunganidzwa kumisikidza zvinoreva kubatana pakati pepombi uye pombi yemvura-inobuda inoitwa pamwe nemvura inoburitsa pombi chigaro che auto-coupling, pasina kushandisa zvakajairwa zvekubatanidza, uye, nguva yekuparadzanisa pombi kubva pombi yemvura pombi. chigaro, ingoiisa pasi pamwe netsvimbo yekutungamira wozoisimudza, zvakaringana kuti usununguke kubva kunetseka nedambudziko uye chengetedza nguva.
Pombi yekutsva yemvura inoiswa pasi mune yakamisirwa yakaoma mhando yekumisikidza kwete chete inogona kutsiva iyo yakare yakatwasuka pombi yetsvina asi zvakare haityi kunyudza mafashama, saka hapana chikonzero chekupatsanurwa kwemafashama-proof nzvimbo, bhenefiti yekudzikisa mutengo wekuvaka.
Ose anotakurika akaomarara-pombi uye akapfava-pombi kumisikidza, pamwe neyakagadzika yakanyorova mhando imwe, ese ari nyore maitiro ekumisikidza.
7. Mota inotonhodza mota inogona kuiswa nepombi, iyo isingakwanise chete kutonhodza mota asi zvakare inogona kubatsira kudzikisa mwero wedziva renzara kuitira kuburitsa tsvina irimo kusvika pamwero wakanyanya.
8. Iyo pombi inoshanda mune yakanyura modhi, saka hapana dambudziko reruzha uye kubatsirwa kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Pashure: MVS Vertical Axial kuyerera uye Yakavhenganiswa kuyerera submersible sewage pombi
Zvadaro: Horizontal Split casing centrifugal yegungwa mvura yekuenda pombi
Kukwanisa 10-8000 m3 / h
Liquid Kupisa kusvika ku60 ºC
Kuvhiya kwekushandisa kusvika 18 bhawa
Main zvikamu zveWQ inowira tsvina pombi
Pump casing & Pump chifukidziro Cast simbi, Ductile simbi, Stainless simbi
Impeller Cast simbi, Ductile simbi, Stainless simbi, Bronze, Duplex SS
Motikari casing Simbi
Mugodhi 2Cr13, 3Cr13, Duplex SS
Zvokuimba chisimbiso Frictional vaviri Girafu / Silicon Carbide
Girafu / Tungsten Carbide
Nesilicon Carbide / nesilicon Carbide
Nesilicon Carbide / Tungsten Carbide
Chitubu Simbi isina ngura
Rubha chikamu NBR
Tsvina kurapwa kuburitsa tsvina
Chirongwa chekuchinjisa mvura
Mvura yemvura ine zvakasviba uye tambo refu
API610 ANSI Chemical Maitiro Akajairwa Petrochem ...
CZ Horizontal Single Stage End kubvisa Centrifu ...
CZ Horizontal centrifugal magumo kubvisa gungwa mvura ...